"Hei Siri" haishande iwe? Edza izvi mhinduro | IPhone nhau
Kubva ku iPhone 6s / 6s Plus, uye zvakare inowanikwa pane yazvino iPad Pro, tinogona kukumbira Siri nezwi redu tichishandisa rairo "Hei Siri". Izvi zvinogoneka nekutenda kune M9 co-processor, iyo inobvumira iyo kifaa kuti igare ichiteerera pasina kuzvionera kwayo kuchikanganiswa nayo. Kunge chero rimwe basa, "Hei Siri" inogona kusashanda, asi izvi zvinowanzo nyore kugadzirisa. Muchikamu chino tichakuratidza Zvekuita kana iro "Hei Siri" basa risingapindure pane yako iPhone kana iPad.
1 Mhinduro dzinogoneka kana "Hei Siri" isingashande
1.1 Chishandiso chako chinotsigira basa racho here?
1.2 Isu tinoongorora kuti yakaitwa here
1.3 Isu takabatana neinternet?
1.4 Isu tinobvisa iyo yakaderera yekushandisa modhi
1.5 Isu tinomanikidza kutangazve kwechigadzirwa
1.6 Isu tinotarisazve «Hei Siri»
1.7 Maikorofoni inoshanda here?
1.8 Bata Apple
Mhinduro dzinogoneka kana "Hei Siri" isingashande
Chekutanga pane zvese ini ndoda kutsanangura chinhu chimwe: iro "Hei Siri" basa ichashanda pane iPhone kana tisina iyo yakachengetedzwa. Ndine mubutiro jira gobvu uye haripindure kana ndiinaro mukati. Kune rimwe divi, iyo iPad Pro inogona kunge iri mune isina kukodzera kesi uye kupindura. Neizvi zvakatsanangurwa, isu tinoenderera mberi nekutsanangura zvikonzero nei iwe usinga pindure.
Chishandiso chako chinotsigira basa racho here?
"Hei Siri" zvinongoshanda chete kana tikashandisa imwe yemidziyo inotevera:
Isu tinoongorora kuti yakaitwa here
Zvine musoro, kuti basa rishande, rakakosha iyo redundancy, it inofanira kuvhurwa. Kuti titarise, isu tinongofanirwa kuenda ku Zvirongwa / General / Siri uye shandisa, kana zvisiri, "Bvumira 'Hei Siri'".
Isu takabatana neinternet?
Siri inoda kubatana kukwanisa kushanda. Kana isu tisina kubatana neinternet, tichaona mufananidzo senge yapfuura. Kana ikashandurwa, takabatana; kana zvichitora nguva yakareba kupindura zvinoreva kuti kubatana kunononoka, asi kuriko. Kana iripo, zvine musoro, ichagara iri nani kubatana kunetwork yeWi-Fi.
Isu tinobvisa iyo yakaderera yekushandisa modhi
Kunyangwe isingapedze simba rakawanda, iro "Hei Siri" basa rinodya zvakanyanya kudarika dai tisina kuishandisa. Saka, hazvizoshande kana isu takagadzira yakaderera nzira yekushandisa nekuti Siri anonzwisisa kuti tinoda kuchengetedza simba. Kana isu tikamutsa iyo yekuchengetedza magetsi maitiro pasina kudikanwa, tinogona kuimisa kuti itetere Siri nezwi redu.
Isu tinomanikidza kutangazve kwechigadzirwa
Kana zvese zviri pamusoro zvanaka, nhanho inotevera yatinogona kuyedza kutangazve iyo iPhone kana iPad. Kana isu tichifunga kuti isu tinoda kugadzirisa zvingangoita diki software kutadza, ini ndaikurudzira kumanikidza kutanga zvekare zvakananga kuti zvinogara zvichitiponesa nguva (kuitira kuti reboot yazvino haina kuzvigadzirisa). Tichamanikidza kutangazve kweyedu iPhone kana iPad nekudzvanya uye kubata zvakasara uye kutanga mabhatani pamwechete kusvikira taona apuro. Ramba uchifunga kuti hatifanirwe kusunungura mabhatani kudzamara taona apuro kana, zvikasadaro, isu tinenge tichingo kudzima.
Isu tinotarisazve «Hei Siri»
Kuti Siri apindure kune yakakurumbira kuraira, isu tichafanirwa kuita yapfuura kumisikidzwa. Kugadziriswa uku kwakakosha kuitira kuti igone kucherechedza izwi redu uye hapana mumwe kunze kwedu anogona kuimisa. Ichokwadi chaizvo, asi ini ndatoona kuti hama ine izwi rakafanana neyangu vanogona sei kumisikidza pasina matambudziko. Nekuti kumisazve "Hei, Siri" kutanga isu tichafanirwa kumisa basa kubva kumaseteni. Paunenge uchigadzirisa switch kana kushandura zvakare, iyo yekumisikidza wizard ichaonekwa. Isu tinongofanirwa kuita zvarinotiudza, asi ini ndinokurudzira kuita izvi kana pasina ruzha rwekumashure kana kuzivikanwa kunogona kutadza mune ramangwana.
Maikorofoni inoshanda here?
Tichiri kugadzirisa mashandiro acho, chishandiso chinogona kutadza kunzwa zvatiri kutaura. Izvo zvinokwanisika kuti chete iri basa riri kukundikana, saka isu tichaongorora kana richishanda kubva kune chimwe chikumbiro. Semuenzaniso, tinogona kuyedza kutumira kurekodha neWhatsApp kana kushandisa Dictation kubva kune chero application inobvumidza iri basa. Kana ikasashanda, tinogona kunge tiine kavha inovhara maikorofoni, saka zvakanaka kuti utarise kana ichishanda isina chevha. Ukasapindura, tinoenderera kunongedzo inotevera.
Kana kunyangwe zvese zvichiri kusashanda, senguva dzose danho rekupedzisira kubata iyo Apple inotsigira. Kana dambudziko riri Hardware, ini ndinofunga kufunga kuti izvo zvisiri kushanda sezvazvinofanirwa kuita ndeye M9 co-processor, asi kuti iApple yehunyanzvi sevhisi iyo inotitaurira. Kana isu tichifunga nezve kuti iyo iPhone 6s yakatanga kutengeswa munaGunyana wegore rapfuura uye iyo iPad Pro yakazviita munaKurume apfuura, zvishandiso zvese zvinoenderana zviri mune gore rekutanga garandi, saka zvakakodzera kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » "Hei Siri" isiri kukushandira? Edza izvi mhinduro
Izvo hazvishande kwandiri nema6s plus ... Inomira kushanda ndega
Irina Alvarado akadaro
Wangu hei Siri anogara achiremadza uye ndinofanira kuigadzirisazve! Iko kudhonza, ndinoita sei kuti irege kumira?
Pindura Irina Alvarado
Gisella Jara akadaro
query, isa iyo ios 11 asi haigone kutumira siri pafacebook.
Pindura kuna gisella Jara
Serge Rodriguez akadaro
Manheru akanaka, ndine iPhone 6 plus uye SIRI haina kunditeerera, ndakaedza kubvisa butiro uye harisi kushanda, pachinzvimbo ndakaedza ne wuatssap uye kana maikorofoni ichishanda. uye siri mukunyora kana izvozvo zvichishanda.
Ndinovimba mhinduro yako.
Pindura Sergio Rodriguez
Manheru akanaka, ndine iPhone 6 plus uye SIRI haina kunditeerera, ndakaedza kubvisa butiro uye harisi kushanda, pachinzvimbo ini ndakaedza ne wuatssap uye maikorofoni haishande. uye siri mukunyora kana izvozvo zvichishanda.
Ndinovimba mhinduro yako
Oscar Vásquez akadaro
Senge yakawanda siri mune iyo 6 plus haishande, zvinoitika kune vamwe uye ini ndichiri kutadza kuwana mhinduro, ini ndamboedza kudzoreredza asi hapana zvachose, zvisinei maikorofoni inoshanda sezvo ndichigona kurekodha, kufona, inoshevedza negudzanzwi, asi nyaya iri kuna Siri chete asingateereri, UCHAVE URI MATSI?
Pindura kuna Oscar Vásquez
Yinnelly Isturiz akadaro
Masikati akanaka, mamaikorofoni ese anondishandira, zvinongoitika kumberi ini ndakabvisa lining, ini ndine mica chete inodzivirira iyo skrini asi ndinoona kuti yakakodzera iphone yangu nekuti haina kuvhara maikorofoni asi kamera . Zvichava kuti ane chimwe chinhu chisina kunaka. 🙁
Pindura Yinnelly Isturiz
Mhoroi ndine iphone 6 asi siri haindishandi ini kana mudziyo wacho wakakiiwa, iyi sarudzo yatove kushanda asi zvakadaro haindipindure, ndinofanira kuitei?
Joaquin kast akadaro
Mu iPhone 6 plus ndinogona kutumira WhatsApp meseji, mutauri, asi Siri haandinzwe. chinhu chinonyengera ndechekuti mavhidhiyo pamberi pekamera hapana ruzha.
Pindura Joaquin Kast
Chakavanzika kuseri kwemakona akapoteredzwa eIOS